Maqaal: Cuqubooyinka Aan Soo Daahin (19 Isbuuc Ma dhaafto) Maanta & Somaliland – Radio Daljir
Maajo 30, 2015 3:19 b 0
Sabti, May 30, 2015 (Daljir) — Malaa\_’iigta naarta illaalisaa waa 19 (Al-Muddathir aayada 30), Xarfaha Bisinkuna waxay ka kooban yihiin 19 Xaraf.Haddaba, bal u fiirso cuqubooyinka aan soo daahin ee ka dhacay Soomaaliya:
1) Maxamed Siyaad Barre, maalintii uu 10ka wadaad qabqabtay taariikhdu waxay ahayd January 17, 1975, kadib markay ka soo horjeesteen Xeerkii Qoyska ee sinaanta ragga & haweenka. Culimadaa waxaa la toogtay taariikhdu markay ahayd Jan/23/1975. Haddaba isla maalintaa waxaa isku dhacay oo burburay 2 diyaaradood oo ahaa kuwii amaanka illaalinayay.
2) Maxamed Ibraahim Cigaal, markuu dad badan oo ganacsato Soomaaliyeed ah oon waxba galabsan oo ay ka mid ahaayeen Mukhtar Moalin Yusuf, Khadar Abdi Haji, Mustaf Sheikh, Hussein Moalin, Abdiaziz Ahmed, Badel Aw Ahmed, & Dahir Abdi Haji uu u gacan galliyay Ethiopia isagoo ku eedeeynayay inay OLNF yihiin. Maalintii la qabqabtay raggaa taariikhdu waxay ahayd April/10/2002. Cigaalna wuxuu sii noollaa muddo 23 maalmood oo kali ah (3 Sitimaan), wuxuuna geeriyooday May/3/2002.
3) C/Samad Cali Shire & C/raxmaan Faroole maalintii ay shacabka badan Taleex ku laayeen taariikhdu waxay ahayd November 28/2014. Maalintii xukunka laga tuurayna waxay ahayd January 8th, 2014. Waxay ka dambeeyeen 40 maalmood oo kaliya (6 sitimaan).
4) Axmed Cabdi Godane maalintuu dillay Sh.C/qaadir Gacamay taariikhdu waxay ahayd Feb/16/2013. Maalintii fidnadii Baraawe ku qaraxday ee Shabaabku kala jabay ee la gawracay ku xigeenkii Shabaabka Ibraahim Afqaani & Sh. Burhaan taariikhdu waxay ahayd June/19/2013. Labadaa wakhti waxaa u dhaxaysay 123 maalmood (17 sitimaan).
5) Maanta oo ay taariikhdu tahay May 28/20158, hooyooyinka, caruurta iyo maatada Yeman ka soo qaxay ee markabka Berbera taaggan loo diiday inay ka soo deggaan, halkaasoo ay ka dul barooranayaan iyagoo gaajosan. Haddaba, bal ciday cuqubadaasi galaafato ayaynu eegi doonnaa 19 isbuuc ee soo socda waa hadday naftu gaarto inshaa Allaah!
Haddaba qofkii isagoo maamul haya ku dulma dadka biri-ma-gaydada ah, waxaa hubaal ah inuu Illaahay isagana la xisaabtami doonno. Badanaana cuqubada & inkaarta dadka madluumiinta/muuminiinta ahi way soo degdegtaa, waxaana badiyaaba la arkaa 19 sitimaan (133 maalmood) gudahood. Haddaba, waxaan maamulka Somaliland ku waaanin lahaa in si degdeg ah maatada xabadda Yamen ka soo qaxday ee Berbera lagu horjoogo laga daayo dulmiga islamarkaasna xornimo buuxda la siiyo.
Mucaaradka Syria oo u Gacanta ku Dhigay 70 % kamid ah Dhulka Syria